Rikoooo.com - Boeing 737-MAX8 Multi-Livery nke ibudata
New Boeing 737-MAX8 Nbudata Multi-Livery
Mbido akwụkwọ a na-agụghị • Ederede 27
Jikọtara: 06 Dis 2016, 04:03
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by jacobmulder » Abụọ 24 Feb 2020, 05:52
Ndewo m ugbu a ejiriwo New 737 Max nweta ụgbọ elu nke m ebudatara taa 24-02-2020, enwere ụfọdụ mmejọ pụtara ìhè na ngwugwu ahụ na nke a na-eme ka m jụọ ajụjụ ma ọ bụrụ na ị na Rikoooo lelee nbudata ahụ tupu mwepụta.
Nke mbu bu nsogbu doro anya nke injin, ha no na Flat na ala nke ugbo ala.
Na Panel Light ịgbanwee na ON "ọnọdụ, e nweghị Panel Ìhè ON mgbe efe n'abalị oge niile dị iche iche kokpiiti ele bụ ọchịchịrị.
Ọkụ Lute na Taxi, yana Igodo nsoro na Strobe ọkụ na ọkụ Anti Collision, siri ike ịhụ n'oge ehihie.
Ikpeazụ mana ọ bụghị ngbanwe obibi KLM na Transavia dị na Liveries ochie.
Ewezuga na ọrụ niile a chọrọ ka arụ ọrụ ka m mere Instrument ILS bịaruo nso n’ọdụ ụgbọ elu Amsterdam na oke mmiri mmiri na ikuku siri ike ruo mgbe ịgbanyụrụ AutoPilot na Nke Obere.
Jikọtara: 17 Mar 2019, 13:38 am
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Nijveld 1 » Abụọ 24 Feb 2020, 12:51
Jikọtara: 30 Ọgọst 2014, 06:33
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by HansM » Abụọ 24 Feb 2020, 15:38
Okwu ọzọ bụ ụda na-ada ụda nke a na-anụ oge niile. Echekwara m na ọ ga-adị mma ma emesịa wepu windo ihu elu nke na - ejighi ya na oge ikpeazụ a.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » Abụọ 24 Feb 2020, 19:43
Akpa injin ndị dị na 737-Max8 ọhụrụ agbachaghị agbacha agbacha mana ntakịrị dị ala na ala, EE erughị 737-800 mana ọ ka na-ahụ anya na ihe atụ 3D nke Hiroshi Igami zuru oke na 100% DUR KA ỌMA.
Maka ọkụ: a na-achịkwa ọkụ niile site na Njikwa Utility ka akọwapụtara ya na ibe nbudata.
HansM: Banyere ụda na-ada ụda, enwere ike idozi ya ma aga m edozi ya ASAP.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » Abụọ 24 Feb 2020, 21:05
M belatala ụda Gyro, ịnwere ike ibudata ụdị kachasị ọhụrụ.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Captain747 » Abụọ 25 Feb 2020, 12:35
Enwere m obi ụtọ ofufe nke 737-max8. Ahọrọ m ụdọ okporo ụzọ ụgbọ elu Britain, wee fega, na-arị ugwu ruru 36,000 wee tinye igwe ndị ahụ na-abaghị uru ma jisie ike laghachi na tarmac ahụ. ọ zara ọfụma na nke ziri ezi. M ga-eme ụfọdụ mgbanwe n’ọkụ n’ebe a na-akwọ ụgbọ mmiri ma dozie nsogbu nke ọkụ eletrik na-adịgide. Na ngwụcha, ụmụ nwoke mere nke ọma, ana m ekele gị ma kelee gị maka ọrụ gị dị ebube.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by jacobmulder » Abụọ 26 Feb 2020, 04:37
Enwere m oriọna nwere obere oge iji chọta Utility panel am na oge na-efegharị n'abalị, ọ masịrị m ime ka ị mara na Runway TurnOff Light Switches na-ejikwa ọkụ ọkụ mgbe ị na-agbanyụ ha site na nlele Virtual Cockpit, n'ozuzu ya bụ nnukwu ọganihu na ọkọlọtọ FSX Ugboelu 737.
Jikọtara: 15 Julaị 2015, 09:17
Location: EBBR - Bruxelles - Belgique
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Ndukwe » Abụọ 26 Feb 2020, 08:49
Enwere otu ihe dị mkpa nke na-emezighi, n'ezie altimita na-egosi MB mgbe ọ ga - egosi IN! Mgbe ị na-ebugharị òké n’elu bọtịnụ mmezi na tebụl Baro Std, ọ na-egosi ugbu a IN ma ọ naghị edozi ha. Na ikanam LEDs ọ na-egosi ụkpụrụ mgbe niile na MB! Echere m na ọ bụ nsogbu nke ụgbọ elu kwesịrị ka nlebara anya nke ndị mmemme. Daalụ maka itinye uche gị.
Isi ọkụ dị iche iche ma ọ bụ ntụpọ na ọkụ dị mma na nke a add-on.
Ekele Rikoooo, Ekele diri m
Config :Asus G752vs Intel(R)Core i7-6820HK CPU @ 2.70 Ghz Système d'exploitation 64 bits, processeur x64. 2x SSD - Windows10 16Go RAM,
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Captain747 » Abụọ 26 Feb 2020, 14:08
Ndewo Jackie, ọ bụ nsogbu XML ma enwere m ike idozi ya.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Ndukwe » Abụọ 26 Feb 2020, 14:12
ok Daalụ maka ozi na pdf gị!